Abavelisi bezityalo ezijikelezayo kunye nabanikezeli - iTshayina lezityalo ezijika izinto
IVEN, ngubani onokukunceda ukuseta umzi-mveliso wonyango ngenkxaso yezobuchwephesha behlabathi kunye nolawulo lwenkqubo efanelekileyo kumazwe aphesheya.
1.Inaliti Machine Ukubumbela
2. Umatshini wokuPrinta oPhezulu weSikali
3. Ukudibanisa Umatshini
4. Umatshini ngamnye wokupakisha isirinji: Iphakheji yebhegi ye-PE / iphakheji yeblister
5. Ukupakisha kwesekondari & UKUDWALWA
6. I-EO sterilizer
Isiraphu yokuhlamba ukugcwalisa umatshini weCaps kubandakanya isiraphu yomoya webhotile / ukuhlamba i-ultrasonic, ukuzalisa isiraphu eyomileyo okanye ukuzalisa isiraphu engamanzi kunye nomatshini wokufaka. Kukudibanisa uyilo, umatshini omnye unokuhlamba, ugcwalise kwaye ujije ibhotile kumatshini omnye, ukunciphisa iindleko zotyalo-mali kunye nemveliso. Umatshini uphela unesakhiwo esixineneyo, indawo encinci yokuhlala, kunye nomqhubi omncinci. Sinokuxhobisa ngokunikezelwa kwebhotile kunye nomatshini wokulebhelisha kwakhona kumgca opheleleyo.
IVEN Pharmatech ngumboneleli onguvulindlela wezityalo ezijikajika ezibonelela ngesisombululo sobunjineli esihlanganisiweyo kumzi-mveliso wamachiza onje ngesisombululo se-IV, isitofu sokugonya, i-oncology njl.
Sibonelela ngoyilo lweprojekthi olusengqiqweni, izixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungelelanisiweyo kwimizi-mveliso eyahlukeneyo yoxubo kunye nezonyango ukusuka ku-A ukuya ku-Z kwisisombululo se-IV esingathambanga se-PVC, isisombululo se-PP sebhotile IV, isisombululo seGlass vial IV, Inalable Vial & Ampoule, Isiraphu, Amacwecwe kunye neeCapsule, ityhubhu yokuqokelela igazi njl.
U-SHANGHAI IVEN PHAMATECH uthathelwa ingqalelo njengenkokeli kumthengisi weeprojekthi ze-IV. Gcwalisa izibonelelo zokuvelisa ii-IV Fluids kunye neParenteral Solutions ezinkulu (LVP) zomthamo onamandla ukusuka kwi-1500 ukuya kwi-24.0000 ii-pcs / h.
IVEN Pharmatech ngumboneleli onguvulindlela wezityalo ezijikajika ezibonelela ngesisombululo esidibeneyo sobunjineli kumzi-mveliso wamayeza kunye nonyango olufana nomthambo wokuqokelela igazi, isirinji, inaliti yokuqokelela igazi, isisombululo se-IV, i-OSD njl., Ngokuthobela i-EU GMP, i-US FDA cGMP, I-PICS, kunye ne-WHO GMP.
Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer,